ပြီးခဲ.တဲ. တနင်္ဂနွေနေ. က ကျွန်မတို.မိသားစု(၃)ယောက်ကို မောင်တစ်ယောက်လိုခင်နေတဲ. မောင်ပေါ်လာ က တိုကျို၊ တကာ့ဒါနော့ဘာဘာ အရပ်မှာချိန်းပြီး ထမင်းလိုက်ကျွေးပါတယ်။ သွားစားဖြစ်တဲ.ဆိုင်နံမယ်က “မိုင်ဆွန်ခ” လို. ခေါ်ပါတယ်။ ရှမ်းစားသောက်ဆိုင်ပါ အဲဒီဆိုင်က လက်ရာသိပ်ကောင်းပါတယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေဆို လာစားတဲ.လူရော၊ လာသောက်တဲ.သူကော အပြည့်ပါပဲ။
အဲဒီနေ.က ကျွန်မတို.စားပွဲရဲ.ဘေးမှာတော့ သောက်လိုက်ပြောလိုက်နဲ. အရမ်းကိုရီရတဲ. အဖွဲ.တစ်ဖွဲ.ရှိပါတယ်။ သူတို.ရဲ. စကားတွေဘယ်လောက်အရှိန်တက်ပြီးရီရသလဲဆိုရင် ကျွန်မတို.စားပွဲက သူတို.ပြောတာကို လိုက်ရီနေမိပါတယ်။ သားလေးကလည်း စကားသိပ်နားမလည်သေးသလို မပြောလည်း ၊မပြောတတ်သေးပေမယ်. သူတို.ကိုပဲ ငေးမောနေပါတော့တယ်။ သူတို.ကလည်း သူတို.အချင်းချင်း အငြင်းအခုံ ဖြစ်ရင်၊သူတို.ချင်းပြောရာကနေ ကျွန်မတို. ဘက်ကိုလှမ်းပြီး စစ်ကူယူပါတယ်။
သူတို.ပြောတဲ.စကားထဲမှာ “ဆိုဘာ့”ဆိုတဲ. ဂျပန်ခေါက်ဆွဲ ကို အင်္ဂလိပ်လိုကော မြန်မာလိုကော ရှင်းပြဘို. စကားလုံးမရှိဘူး ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ သူတို.က ကျွန်မတို.ဘက်ကို စစ်ကူမတောင်းသလို၊ ကျွန်မလည်း ဘာမှ ၀င်မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဲဒါကိုကြားပြီး ကျွန်မလည်း ဆက်စပ်ပြီး အတွေးတွေပေါ်လာပါတယ်။ တစ်ချို.ဂျပန်စကားမှာ သူ.ကို အဓိပါယ်ကို နားလည်အောင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာနဲ. ဘာသာပြန်သော်လည်း မူလ ဂျပန်စကားအခေါ်အဝေါ်အတိုင်း ခေါ်ဝေါ် လိုက်မှ ပိုပြီး ဆိုလိုရင်းကို ထိရောက်တာမျိုး တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာ၊ “နင်းဂျား” “တန်ပူရာ” “ ဆူရှီ” “ဆာရှိမိ” “ဟာရာ့ခိရိ” “ကီမိုနို” တို.လို အခေါ်အဝေါ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို.ပြောတဲ. “ဆိုဘာ့”လည်းအဲဒီလိုပါပဲ။ အဓိပ္ပါယ် ကိုရှင်းပြတဲ.အနေနဲ. အင်္ဂလိပ်လို“ buckwheat ” မြန်မာလို“ ပန်းဂျုံ” ဆိုပြီး စကားလုံးတွေရှိပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ မြန်မာဘာသာမှာကော အဓိပ္ပါယ် ကို နားလည်အောင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာနဲ. ဘာသာပြန်သော်လည်း မူလစကားလုံးကို သုံးမှ ပိုမိုပြီး ဆိုလိုရင်းကို ထိရောက်တာမျိုးတွေရှိတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ လောလောဆယ်သတိရတာကတော့ “ဇော်ဂျီ” “ဘုရားကိုးဆူကပ်ခြင်း” “လုံချည်” ဆိုတာတွေပါ။
“ဇော်ဂျီ”ကို တော့ မြန်မာဖောင့် ကို ဒေါင်းလုပ်၊ လုပ်ချင်တဲ. နိုင်ငံခြားသားတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပြောပြတဲ.
အခါမှာ ချက်ချင်းဆိုသလို သူတို.ပြန်မေးတတ်ကြတာက “ ဇော်ဂျီဆိုတာဘာအဓိပါယ်လဲ” ဆိုတာပါပဲ။ “ဇော်ဂျီ ဖေါင့် ”ကို တီထွင်ပြီး “ဇော်ဂျီ”လို. အမည်နာမ တတ်ပေးခဲ.ကြတဲ.သူတွေကို အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ တကယ်ကို မြန်မာဆန်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ. နာမည်ကို ပေးခဲ.ကြလို.ပါပဲ။ (အထက်က “ဒေါင်းလုပ်” ဆိုတာကိုလည်း ဂျပန်ဘာသာမှာကော မြန်မာဘာသာမှာကော သူ.အတိုင်းသုံးကြတယ်နော်။ )
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ. “ဘုရားကိုးဆူကပ်ခြင်း” ဆိုတဲ. စကားလုံးနဲ.ပတ်သက်တဲ. အကြောင်းအရာလေး
တစ်ခုကို သတိလည်းရ ပြုံးလည်းပြုံးမိပါတယ်။ ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာတုန်းက အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ပုဂံကိုဘုရားဘူးသွားတုန်းကပေါ.။ ဘုရားတွေမှာ ပုဂံရာဇ၀င်နဲ. ဘုရားတွေ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ခရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ. မြန်မာလို နှစ်ဘာသာနဲ.
ရှင်းပြတဲ. ကလေးလေးတွေကို အုပ်စုနဲ. တွေ.ပါတယ်။ သူတို.က ပထမ မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့ အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်လိုလည်း ပြောပြအုံးလေဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြနေတဲ့အထဲမှာ “ Nine Buddhas’s Evening party” ဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အတူတူပါတဲ. သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေးတစ် တစ်ယောက်က “ ဟာ၊ မင်းကလည်းကွာ ငါတို. ဘုရားက ညစာမှ မစားတာ ဘာလို. Evening Party လုပ်ရမှာလဲကွလို.” ဆိုတော့ ကလေးခမျာ အကြပ်ရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ.ကိုလည်း သင်တဲ.လူက အဲလိုပဲ သင်ပေးထားတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မတို.မိန်းခလေးအုပ်စုကတော့ “ဟဲ.၊ ငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ်၊ နင်သိရင်လည်း ကလေးကို သေချာသင်ပေးလိုက်လေ” ဆိုပြီး ရီခဲ့ကြပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, September 07, 2009
ယောကိုဟားမားချိုင်းနားတောင်း နဲ. ယောကိုဟားမားဆိပ်က...
တကာ့အို တောင်၊ ကေဘယ်ကား
ကိုကိုက “ ဂြိုလ်သား ” “ကျွန်မက သောကြာဂြိုလ်ကိုရောက...
“ယူ နို မိ” နို.ဂျီးမ